२२ वर्ष’का युवकका ३ जना श्रीमती, तीनै जना मिलेर खोज्दै-छन् चौथी सौता ! – Wow Sansar
December 29, 2020 134
सौता भन्ने शब्द महिलाहरु-लाई पटक्कै मन नपर्ने शब्द हो । महिलाहरु विवाहपछि घरमा धेरै दुःख सहेर बसेका उदा’हरणहरु छन् । महि’लाहरु निकै सहनशील हुन्छन् तर विवा’हित महिला’ले सहनै नसक्ने कुरा हो – सौता ।उनीहरु अरु धेरै कुरा स’हन सक्छन् तर आफ्नो श्रीमान:लाई अरु कसैसँग बाँड्न पटक्कै तयार हुँदैनन् । तर एक २२ वर्षका युवकका तीन श्रीमतीहरुले भने चौथी सौता’को खोजी गरिरहेका छन् ।
गल्फ टुडेका अनुसार अद’नान नामका यी पाकि:स्तानी युवकले २२ वर्षको उमेरसम्म आइ’पुग्दा तीन बिहे गरिस’केका छन् । र, अब उनका तीन श्रीमतीहरु मिलेर चौथी सौता खोज्दैछन् । उनका तीनैवटी श्रमिती उनीसँगै छन् ।पाकिस्तानको सियाल-कोटका अदनानको चर्चा अहिले विदेश:सम्म पुगेको छ । मुस्लिम समुदा’यमा १ भन्दा धेरै विवाह गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन तर श्रीमतीले नै आफ्नी सौता खोज्नु भने निश्चय पनि अनौठो कुरा हो ।
अदनानले पहिलो बिहे १६ वर्षको उमेरमा गरेका थिए । दोस्रो श्रीम’तीसँग २० वर्षमा र अर्कीसँग २१ वर्षको उमेरमा बिहे गरे’का हुन् । अदनानकी श्रमिती’हरुको नाम शुंभाल, शुबाना र शाहिदा हो ।अहिले यी तीनै’जना सौता मिलेर चौथी सौताको खोजी गरिरहेका छन् र उनीहरुलाई चौथी सौता पनि अंग्रेजी’को एस अक्षरबाट नाम आउने नै चाहिएको छ । एस अक्षर’बाट नाम आउने सौता आएमा घरमा खुसी रहिरहने उनीहरु मान्छन् ।
अदनानका २ श्रीम’तीका सन्तान पनि छन् । जेठी श्रीमती शुंभालका ३ र माइली श्रीमती शुबा’नाका दुई सन्तान छन् । शुबाना’को एउटा बच्चालाई कान्छी शाहिदाले आफ्नो माने’की छिन् ।अदनानका तीन श्रीमती’हरुले उनी’माथि सबै श्रीमतीहरु:लाई पूरा समय दिन नसकेको आरोप भने लगाउँछन् तर ती’नैवटीले अदनान र बच्चाहरुको ख्याल गछृन् । अदनान तीनै-जना श्रीमती:लाई प्रेम गर्छन् । उनको घरको एक महि’नाको खर्च डेढ लाख पाकि’स्तानी रुपैयाँ हुन्छ ।
Prevमंगलबार सुनको मूल्य घट्यो, कतिमा कारोबार हुँदैछ ?
Nextकाठमाडौंबाट सर्लाही जाँदै गरेको यात्रुबाहक बसमा बेवारिसे ७ तोलाको सुनको बाला फेला परेपछि